Hlola iCanada - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili eziphezulu eCanada.
Hlola iCanada kanye eduze kwayo ngamadolobha
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eCanada
Bukela ividiyo ngeCanada
Hlola iCanada izwe elikhulu kunawo wonke eNyakatho Melika ngendawo yomhlaba, okwesibili emhlabeni jikelele (ngemuva kuphela Russia). Yaziwa kabusha emhlabeni wonke ngomhlaba wayo omkhulu, ongafundwanga, inhlanganisela yamasiko nomlando ohlanganisiwe, iCanada ingelinye lamazwe acebile emhlabeni futhi indawo enkulu yokuvakasha.
ICanada iyizwe elinamabanga amade nobuhle bemvelo obucebile. Ngokwezomnotho nangokwezobuchwepheshe, nangezinye izindlela eziningi afana kakhulu nomakhelwane wakhe ngaseningizimu, United States, yize kunomehluko omkhulu phakathi kwala mazwe womabili. Ngenkathi womabili la mazwe enomlando omude futhi oqhubekayo wobukoloni phezu kwabantu bomdabu bamazwe abo, iCanada ijabule ngokuphelele ngamagugu ayo aseBrithani futhi abantu abaningi baseCanada bayaziqhenya ngalokhu. Iningi lemvelo eyakhiwe njengamanje yaseCanada eyakhiwe kanye nethonya livela ikakhulukazi kubantu abavela kwamanye amazwe abavela ezizweni ezimbili zaseYurophu, iBrithani kanye France. Le ndlela yemvelo ehlukene kabili ihluke kakhulu kunase-United States, nakwezinye izingxenye zeCanada, ikakhulukazi Quebec kanye nezingxenye ze-New Brunswick, abantu baseCanada ngokuyinhloko bakhuluma isiFulentshi. ICanada yaba umbuso olawula ukuzibusa kwi1867 ngesenzo sepalamende yaseBrithani, futhi namanje uselilungu eliqhoshayo leCommonwealth of Nations.
Canada izifunda kanye nemizi
Abahambi abaningi abangena noma badlula eCanada ngomoya bazodinga i-Electronic Travel Authorization (eTA) noma i-visa yezivakashi. (Ngaphandle kwalapho kubalwa izakhamizi zase-US / ezizweni kanye nezakhamizi zaseSanta-Pierre nezaseMiquelon.) I-eTA ibiza i- $ 7 futhi isebenza iminyaka emihlanu noma kuze kube yilapho ipasipoti yakho iphela, noma ngabe yikuphi okuza kuqala.
Labo abangayifanele i-eTA kuyadingeka ukuthi bathole i-Visa Yesikhashana Yabahlali ngaphambi kokuhambela eCanada. Lokhu kungenziwa ehhovisi eliseduze laseCanada Visa laseCanada.
Kungenzeka ukuthi ufike eCanada ngendiza, okungenzeka ukuthi ungene kuyo Montreal, Ottawa, Toronto, ICalgary noma Vancouver (amadolobha amakhulu we-5, ukusuka eMpumalanga kuye entshonalanga. Amanye amadolobha amaningi anezikhumulo zezindiza zomhlaba wonke, nezindiza ezishibhili eziya eCanada zifika nsuku zonke.
ICanada inkulu - izwe lesibili ngobukhulu emhlabeni ngemuva kweRussia. Lokhu kusho ukuthi uzodinga izinsuku ezimbalwa ukwazisa ngisho nengxenye yezwe. Eqinisweni, iSt. John, iNewfoundland, isondelene nendawo London, I-UK, kunokuba injalo eVancouver.
Indlela enhle yokufika ezweni lonke ngomoya. I-Air Canada iyisithwali esikhulu ezweni lonke, futhi inethiwekhi enkulu kunazo zonke namahlelo amvamisa kakhulu kodwa iWestJet nayo inikezela ngomsebenzi ofanayo.
Abantu abaningi bakhetha ukuqasha imoto. Yize kubiza ngandlela-thile uma uhamba wedwa, lokhu kungaba enye indlela enomnotho uma uhlanganyela izindleko nabanye. Kodwa-ke, kunemikhawulo eminingi kanye nezingqinamba ekuqashisweni kwezimoto eCanada.
Ngokuyisisekelo, uma ngempela ufuna ukuzungeza eCanada, kungcono ukuba nemoto.
Insizakalo yabagibeli besitimela eCanada, noma iphephe kakhulu futhi ihlala intofontofo, imvamisa iyindlela ebizayo futhi engafanele kwezinye izinhlobo zokuhamba. Umgwaqo ophakathi kweWindsor neQuebec City umane umehluko kulokhu kuhlanganiswa. Futhi, uma ubuhle bemvelo buyinto yakho, cishe ukuhamba kwezitimela ezinsukwini ezintathu phakathi kweToronto neVancouver kudlula ubukhazikhazi bezindawo zaseCanada nasezintabeni zeRocky, ngezimoto ezibukwayo ezivumela abagibeli ukuthi bathathe ukubukwa okuhle.
Hlela amalungiselelo ngaphambi kwesikhathi ukuze uthole imali ephansi. I-VIA Rail iyinkampani enkulu yezitimela eCanada.
IsiNgisi nesiFulentshi yizilimi ezimbili ezisemthethweni eCanada. Konke ukuxhumana nezinsizakalo ezihlinzekwa kuhulumeni wobumbano kuyatholakala ngazo zombili izilimi. Iningi labantu baseCanada lisebenza ngezilimi ezilinganayo, yize ezinye izingxenye zezwe zinesikhulumi sesiNgisi nesiFulentshi. Abantu abangaphezu kwengxenye yesine baseCanada bakhuluma izilimi ezimbili noma ngezilimi eziningi. Abantu abaningi phakathi Montreal, Ottawa, futhi I-Quebec City okungenani izilimi ezimbili ezingxoxweni.
IsiNgisi siwulimi oluvelele kuzo zonke izifundazwe ngaphandle kweQuébec, lapho isiFulentshi sibusa futhi sithuthukiswa ngenkuthalo njengolimi oluphambili. Kodwa-ke, kunemiphakathi eminingi yama-francophone asakazeke ezweni lonke.
I-CN tower Indawo ebekiwe yaseCanada, umbhoshongo wemitha engu-553 onendawo yokudlela evumayo naphansi nengilazi. Itholakala ngaphandle kweRoger Stadium uhambo lwemizuzu eyi-1 ukusuka lapha.
Roger Center 1-iminithi uhamba ngezinyawo usuka CN CN uye ekhaya leToronto Blue Jays. Idume ngophahla lwayo olubuyisekayo & amakhonsathi
IPhalamende Hill Isakhiwo sePhalamende esiqongweni sentaba lapho kuhlala khona uhulumeni
Isifunda Samanxusa Yisifunda esidumile enhlokodolobha lapho abahlonishwa abaningi bakwamanye amazwe bahlala futhi behlala khona
Isikhumulo semikhumbi esidala saseMontreal esidumile esinezitolo nemisebenzi e-StLawrence River
IMount Royal Yaziwa nangokuthi iMont-Royal ngesiFulentshi. Ipaki phezulu kwegquma
Indawo eseMontreal Olympic Park Landmark yema-1976 Summer Olimpiki
I-Quebec Citadel Complex enenqaba ende esebenzayo, kanye nomnyuziyamu nokushintsha kwemikhosi yokugada.
I-Quartier Petit Champlain Inhlangano yezokuphatha ephethwe ngabaphathi enezindawo zokuphumula ezizimele, imidwebo, izindawo zokudlela kanye nemidlalo yeshashalazi.
I-Old Port Quebec City Ichweba lekota elidala lomuzi lapho izakhiwo eziyingqophamlando ezineFrance Architecture zisazungeza kuze kube namuhla.
Igalari yobuciko beChâteau Frontenac (Galerie d'Art du Château Frontenac) Igalari yobuciko enhliziyweni yedolobha elidala laseQuebec
Beka i-d'armes I-squre yomphakathi efana naleyo eseMontreal ngesithombe sikaPaul de Chomedey
Idolobha elidala Quebec Ikota elidala lomuzi lidume ngokwakhiwa kwalo kwe-french nomlando weFrance Canada
IStanley Park Ipaki enkulu evulekile evulekile etholakala eduze nolwandle iPacific.
Ibhilidi lokumiswa kweCapilanoIndlela ende ende emisiwe yecanada eCanada
IGranville Market Itholakala eGranville Island, lapho ungathenga khona umkhiqizo omusha.
Ikota ye-Gastown Isifunda esidumile eCanada esidume ngewashi laso elinamandla.
URobson Street Umgwaqo wokuthenga ugcwele izitolo nezindawo zokudlela kanye nenxanxathela yezitolo.
Okufanele ukwenze eCanada
Imali yaseCanada yidola laseCanada (uphawu: $ elifanele isifinyezo yi-CAD), okubhekiselwa kulo ukubizwa nje ngokuthi "idola". Idola elilodwa ($) liqukethe amasenti we-100 (¢).
Ngokuvamile, kufanele ugxile ekuthengeni imikhiqizo noma izimpahla ezithile ezitholakala kuphela eCanada noma ezenziwa lapho (isib. Izikhumbuzo zaseCanada).
Kuwo wonke amadolobha namadolobhana, kungenzeka ukuguqula phakathi kwamadola aseCanada nezimali ezinkulu kakhulu emabhange amaningi. Ngaphezu kwalokho, abathengisi abaningi eCanada bazokwamukela imali yase-US okungenani noma ngenani elincishisiwe, futhi amagatsha amaningi asebhange laseCanada avumela abasebenzisi ukuthi bakhiphe imali eyi-USD esikhundleni seCAD. Wonke amabhange eCanada anikezela ngokushintshana kwemali ngenani lemakethe yansuku zonke. Kwezinye izindawo, ama-bureaus wokushintshaniswa kwangasese azonikeza amanani angcono okushintshana kanye nezimali eziphansi kunamabhange, ngakho-ke uma unesikhathi ngesikhathi sakho sokuhamba ubheke phezulu. Kungase kukugcinele imali ekushintshaniselweni kokubini lapho ufika nangaphambi kokuba uhambe, ngoba amadola aseCanada kungenzeka angabizi kangako ezweni lakini, ikakhulukazi uhlamvu lwemali.
Amakhadi wesikweletu amukelwa kabanzi, i-Visa ne-MasterCard yamukelwa ezindaweni eziningi, futhi i-American Express ngandlela thile ne-Diners Club kaningi ezindaweni zokudlela nasehhotela ezikhudlwana. Ukutholwa kuvame ukwamukelwa ezindaweni okuhloselwe kuzo abantu baseMelika njengamahhotela nezinhlangano eziqasha izimoto. Ngokuvamile, ukusebenzisa ikhadi lesikweletu nakho kukuthola inani lokushintshana elingcono ngoba ibhange lakho lizoguqula ngokuzenzakalelayo imali esezingeni eliphakeme lansuku zonke.
Ukubhenka / ukuthenga nge-elekthronikhi
Uhlelo lwebhange luthuthukiswe kahle, luphephile futhi luhambile kwezobuchwepheshe. Ukusetshenziswa kwe-ATM eCanada kuphakeme kakhulu. Kukhona inethiwekhi ephephile futhi ebanzi yemishini yasebhange (ama-ATM) lapho ungakwazi ukusebenzisa ikhadi lakho lasebhange ukukhipha imali ngokuqondile kwi-akhawunti yakho ekhaya, kodwa imali ebandakanyekayo ingangaphezu kwamakhadi wesikweletu. Uma kungenzeka, zama ukusebenzisa imishini ye-ATM eshadiwe njengoba imali ekhokhwayo ishibhile kunemishini ye-ATM ezimele. Zonke izikhungo zebhange laseCanada zingamalungu e-transac network transaction network yonkana. Abathengisi abaningi nezindawo zokudlela / imigoqo bavumela ukuthengwa kwekhadi le-ATM nge-Interac, noma ngabe bengawemukeli amakhadi amakhulu esikweletu, futhi iningi labantu baseCanada akuvamile ukusebenzisa imali nakancane, likhetha izinhlobo zokukhokha ngogesi. Amanye amanethiwekhi we-ATM, kufaka phakathi i-PLUS asekelwa kabanzi futhi azokhonjiswa esikrinini se-ATM.
Yazi ukuthi cishe uzokhokha ngaphezu kwentengo ebonisiwe, njengoba amanani entengo evame ukungafaki intela yokuthengisa.
Kuzofakwa intela ngaphezulu kwentengo ekhonjisiwe ku-cashier. Ngaphandle kokuthi intengo ekhonjisiwe ifaka phakathi zonke izintela ezisebenzayo kuyiphethiloli (inani olikhokhayo linjengoba libonakala epompini), imali yokupaka, notshwala obuthengwe ezitolo zotshwala, kwezinye izinto zokudla, kanye nezinsizakalo zezokwelapha njengokuhlolwa kwamehlo noma kwamazinyo.
Ukuthi udlani futhi uphuze eCanada
Izindawo zokuhlala eCanada ziyahlukahluka kakhulu kumanani ngokuya ngesikhathi nendawo. Ngenhlanhla ungathola amanye amahhotela ashibhile eCanada. Emadolobheni amaningi nasezindaweni eziningi zabavakashi, lindela ukukhokha ngaphezulu kwe- $ 100 noma ngaphezulu ukuthola igumbi lehhotela elihle. Uma ebuza njalo ubuza ukuthi ngabe kukhona intela ifakiwe, ngoba abanye bayinikela ngentela efakiwe, abanye abayifaki.
Ukuphepha eCanada akuyona neze inkinga, futhi umqondo othile ojwayelekile uzohamba ibanga elide. Ngisho nasemadolobheni amakhulu, ubugebengu obunobudlova akuyona inkinga enkulu, futhi bambalwa kakhulu abantu abaake bahlome. Ubugebengu obunobudlova abudingi ukukhathaza umhambi ojwayelekile, ngoba imvamisa ifakwa ezindaweni ezithile futhi akuvamile ukuba yicala elingahleliwe. Amacala ahlobene nezidakamizwa nawo ayenzeka. Izimpi zasemgwaqweni phakathi kwezigelekeqe azenzeki kangako kodwa ziye zenza izihloko zezwe, lezi zidlame zodlame zivame ukwenzeka ngezigxobo endaweni ethile ngenxa yempi ye-turf noma ukushoda kwezidakamizwa. Inani eliphelele lobugebengu emadolobheni aseCanada lihlala liphansi uma liqhathaniswa nezindawo ezisemadolobheni ezifanayo emhlabeni wonke.
Amaphoyisa eCanada cishe njalo ayazikhandla, athembekile futhi athembekile. Uma uhlangabezana nazo noma yiziphi izinkinga phakathi nokuhlala kwakho, noma zilula njengokulahleka, izikhulu zizokwazi ukukusiza.
Abantu baseCanada bakubheka kakhulu ukushayela ngotshwala, futhi kuyimpilo yomphakathi ukuphuza nokushayela. Ukushayela ngenkathi ungaphansi kwethonya lotshwala nakho kuyakujeziswa ngaphansi kweCriminal Code of Canada futhi kungabandakanya isikhathi eside sasejele, ikakhulukazi kulabo abaphindayo. Uma "ushaya" umkhawulo ongokomthetho wokuqukethwe kwe-alcohol alcohol (BAC) ecaleni komgwaqo umshini weBreathalyzer, uzoboshwa futhi uchithe amahora ambalwa ejele. Ukutholwa unecala lokushayela ngaphansi kwethonya (i-DUI) cishe kuzosho ukuphela kohambo lwakho oluya eCanada, irekhodi lobugebengu, futhi uvinjelwe ekubeni ungene kabusha eCanada okungenani iminyaka eyi-5.
Ukuthenga izinsizakalo zocansi akukho emthethweni yonke indawo eCanada. Lindela ukuhlawuliswa okungenani i-300C $. Kwesinye isikhathi, amaphoyisa angahlasela izitolo futhi akubambe.
Akunakwenzeka ukuthi ubhekane nezinkinga zempilo lapha ongeke ubhekane nazo kunoma yiliphi izwe elinentshonalanga.
Yazi ukuthi izifundazwe eziningi zaseCanada zikuvimbe konke ukubhema kwangaphakathi ezindaweni zomphakathi nasezindaweni ezingenayo. Eminye imigoqo ifaka izindawo ezinjengezindawo zokukhosela amabhasi namaphaseji angaphandle. Bheka Ukubhema.
Ingqalasizinda yezokuxhumana yeCanada yilokho ongakulindela ngezwe elinezimboni. Kodwa-ke, izindleko zokuxhumana ngezwi nedatha zivame ukubiza kakhulu uma kuqhathaniswa namazwe amaningi aseYurophu.
Omakhalekhukhwini basetshenziswa kabanzi, kepha ngenxa yobukhulu obukhulu baseCanada kanye nenani labantu abancanyana, izindawo eziningi zasemakhaya ezingahambelani nemigwaqo emikhulu yokuhamba azinamsebenzi.
Bonke abathwali bezwe abakhulu banikela ngamakhadi we-SIM akhokhwe kuqala ngamaphakeji wokuqalisa ebangeni lama- $ 75 ngenani elithile lesikhathi se-air time lifakiwe. Amapulani akhokhelwa ngokuvamile anezinga leminithi ngalinye le- $ 0.25, kepha abaningi banezengezo "zakusihlwa nezimpelasonto" cishe zama- $ 30 / ngenyanga.
Kunezindlela eziningi zokufinyelela kwi-Intanethi, kufaka phakathi izikhungo eziningi emitatsheni eminingi yomphakathi.
Amadolobha amakhulu kakhulu naphakathi nendawo azoba namakhefu e-Intanethi nawokudlala.
Ukufinyelela kwi-Wi-Fi kuvamile emadolobheni futhi kutholakala ezitolo eziningi zekhofi, imitapo yolwazi yomphakathi nakwezinye izindawo zokudlela. Yize ezinye izindawo zikhokhisa imali eyeqile ukuze isetshenziswe, ezinye zihlinzeka nge-Wi-Fi yamahhala. Qaphela ukuthi ukuthenga umkhiqizo wokusungulwa kulindeleke, noma ngabe kushaja ukufinyelela kwi-inthanethi. Ukuthenga ikhofi elincane noma itiye kuyahlangabezana nale mfuneko. Izikhungo zezindiza eziningi neziteshi ezithile zesitimela i-VIA nazo zinikezela nge-Wi-Fi yamahhala ezindaweni zabagibeli.
Umakhelwane waseCanada oseningizimu, e-United States, angaba uhambo olusuka eCanada noma lube yingxenye yeholide lakho. Izindawo ezinjengeNiagara Falls, New York State, New York City, IDetroit, neSeattle zitholakala kalula ezokuhamba zomphakathi noma ezinyaweni kwezinye izimo. Bona i-athikili esemqoka e-US ngezidingo zokungena - uma udinga i-visa qiniseka ukuthi isebenza kahle ngaphambi kwesikhathi.
ISanta-Pierre neMiquelon ziyiziqhingi ezimbili ezincane ezisogwini lweNewfoundland. Naphezu kosayizi wabo omncane nokusondela okuhlobene nolayini waseCanada ogwini, angumNyango waphesheya kwezilwandle France nokuphela kwesiqu sobukoloni baseFrance eNyakatho Melika. Ukungena kulomphakathi omnandi wasolwandle waseFrance, thatha isikebhe sezimoto usuka eFortune, eNewfoundland phakathi nehlobo, noma izindiza ezihleliwe ezivela eMontreal, eHalifax naseSt. Johns unyaka wonke.
IGreenland, umakhelwane omkhulu wesiqhingi saseCanada esisempumalanga, yize ehlukaniswe ngaphansi kwamanzi kwe-50km kwezinye izindawo ayitholakali kalula kusuka eNyakatho Melika. Umthwali wefulegi i-Air Greenland indiza isuka e-Iqaluit eNunavut (YFB) iya enhlokodolobha iNuuk (GOH) kabili ngesonto kusuka ngoJuni kuya kuSepthemba. Izindiza zesizini ziyatholakala kusuka eReykjavik, i-Iceland (KEF) nonyaka wonke ngeCopenhagen (CPH). Enye inketho ebiza kakhulu, yimikhumbi yokuhamba ngesikebhe ehlobo evela e-US naseCanada. Naphezu kobunzima obulinganiselwe bokufika kulesi siqhingi, ubuhle bemvelo obungakaze butholwe be-Arctic benye yezindawo ezikude kakhulu emhlabeni benza kuwufanele umzamo.
I-L'Anse aux Meadows Indawo Yomlando Kazwelonke
Isifunda-mlando sase-Old Québec
I-Old Town Lunenburg
Ukuma komhlaba kweGrand Pré
Isiteshi se-Red Bay Basque Whaling Station
I-Writing-on-Stone / Áísínai'pi